I-Samsung 360 Round, ukuzibophelela kwiividiyo ezingama-360 zeengcali | Iindaba zeGajethi
Kwimarike sinokufumana iimodeli ezahlukeneyo esivumela ukuba senze urekhodo lwe-360-degree, ukuze sonwabele kamva ngezixhobo eziyinyani. Kodwa ayizizo zonke ezifikelelekayo kwaye zisinika iziphumo ezigqwesileyo. Kumsebenzisi oqhelekileyo, iSamsung isinika ifayile ye- IGear 360, isixhobo esilawulwa ziikhamera ezi-2 oko kwasivumela ukuba sikwazi ukurekhoda okusingqongileyo, nangona kungenjalo ngendlela elula.
Kwimeko ezinobunzima ngakumbi okanye iimeko, iSamsung isungule ikhamera entsha ejolise kwicandelo lobuchwephesha phambili kakhulu kwaye usinika iikhamera ezili-17, ngendlela esivumela ukuba sibhale phantsi yonke imeko yethu ngaphandle kokwenza iintshukumo ezingaqhelekanga ngokungathi sibamba iimpukane.
I-Samsung 360 Round ilawulwa zimbini zeekhamera ezibekwe ngokuthe tye kwaye enye ephezulu ukurekhoda ngokuthe nkqo. Lo mzekelo isivumela ukurekhoda iividiyo kwisisombululo se-4k ngesandi se-3D ukuze ikwazi ukuvelisa kwakhona nakwesiphi na isixhobo sokwenyani. Kodwa ukongeza, ikwasivumela ukuba senze usasazo ngqo, olululo xa sifuna ukusasaza ngqo isiganeko esifana nekhonsathi, umdlalo ...
Ikhamera nganye isinika isisombululo se-2 mpx ngokuvula kwe-f / 1.8. Esona sisombululo siphezulu sinokurekhoda yi-4k kwi-30 fps. Ukurekhoda isandi sendalo esingqongileyo, i-Samsung 360 Round ineemakrofoni ezi-6 ezihlanganisiweyo kunye nethuba lokongeza ezi-2 ngaphezulu kumazibuko amabini asinika wona. Iyaxhathisa ukutshiza kwamanzi kunye nothuli ngesatifikethi se-IP65, inendawo yokugcina yangaphakathi ye-256 GB ngekhadi le-MicroSD okanye ukuya kuthi ga kwi-2 TB nge-SSD. Ubungakanani beli sixhobo ziimilimitha ezingama-205 ububanzi nge-76,8 ubukhulu kwaye ixabiso lazo li-1.93 kg.
Ngokumalunga nexabiso, inkampani ayikabeki mthetho kuyo, kodwa ijolise kwimeko yobungcali, kunokwenzeka ngakumbi ukuba ixabiso liyasinda ezipokothweni zabasebenzisi abaninzi. Inkampani yaseFinland iNokia, yasungula isixhobo esifanayo kwimarike kwiminyaka embalwa edlulileyo yemeko zobungcali, kodwa ngelishwa kwaye ngenxa yempumelelo encinci kutshanje kuye kwanyanzeleka ukuba iyeke ukuyithengisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-Samsung 360 Round, ukuzibophelela kwiividiyo ezingama-360 zeengcali